Ukudubula kukaMat Lauer kukhuthaza ukuba 'namhlanje' bonise ukuGqibela kokuJongwa: Ibali elipheleleyo - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Imilinganiselo 'yanamhlanje' yokubonisa ngokwenyani yenyuka emva koMat Lauer
Imilinganiselo 'yanamhlanje' yokubonisa ngokwenyani yenyuka emva koMat Lauer
UMat LauerUMichael Loccisano / Getty Izithombe
ilitye elibandayo steve austin ixilongo
Huh, ke ukulinganiswa kwakho kungaphucuka ukuba uyabagxotha abatyholwa ngokwesondo? Inomdla.
Ii-NBC Namhlanje Amanqaku abonisa ukunyuka ngeepesenti ezinkulu ezingama-43 ukusukela oko UMat Lauer wagxothwa kwiveki ephelileyo , ngokweedatha zeNielsen (nge TheWrap ). Sele umboniso woku-1 wakusasa kwintengiso ye-18 ukuya kwi-49 kunye ne-25 ukuya kwi-54 yeedemografi, Namhlanje 'S Ukalisho ngokwenyani luchaze iipesenti ezingama-43.2 kuzo zombini iithagethi zeminyaka.
Kukonke, Namhlanje 'Abaphulaphuli bebonke bakhule ngama-36.4 eepesenti kubabukeli bebonke, usuku ngapha kwemini, kwivenkile nganye. Yibhampasi enkulu ene-NBC ehleli intle ngalo mzuzu. Abaphathi benethiwekhi ngokuqinisekileyo balindele ukuba elo nani libuyele emhlabeni kwezi veki zizayo, kodwa iya kukubonisa ukuba lonke ucinezelo lunokuba lucinezelo olulungileyo kulo mhla nakweli xesha.
Ufuna enye idatha? Kwiveki ephelileyo, nge-7 kusasa ngoLwesithathu Namhlanje uhlelo (umboniso wangoNovemba 22 owawuthathelwa ingqalelo njengowodwa ngenxa yombulelo) wanyuka ngeepesenti ezingama-41 iyonke, kubandakanya neepesenti ezingama-44 phakathi kwababukeli abaneminyaka engama-25-54. Yiya ufumane ingeniso elahlwayo, abathengisi!
Namhlanje ngokulula ukukhawulezisa ukhuphiswano kumanqaku phakathi kwemiboniso yasekuseni kwiveki ephelileyo, utshintsho olukhulu kwiminyaka yakutshanje. Unyaka ukuya kumhla, Namhlanje Wayedibanise iipesenti ezili-10 kubabukeli bebonke nge-15 yeepesenti eyothusayo kwi-25 ukuya kuma-54 yedemo, nganye Nielsen . Omabini la manani abonisa olona tshintsho lubi phakathi kwayo yonke imiboniso yasekuseni. Inqaku lokufuna ukwazi lidlala ngokucacileyo kwi-NBC ngoku, kodwa ixesha elide, ngekhe kube lula ukubuyisela ubuso bayo obudumileyo. Ubuncinci inethiwekhi inee-Olimpiki zasebusika ze-2018 zokunceda ukulinganisa i-goose ngoFebruwari. Ngaba u-Ann Curry ufumaneka ngalo naliphi na ithuba?
Nantsi indlela ezintathu eziphambili zosasazo zikamabonwakude ezibonisa ngayo xa kuthelekiswa nomyinge wababukeli abangama-2017 kunye nedemo enobuntu yomthengisi, ngokutsho kwendawo:
1. Molo waseMelika elungileyo : 4.315 yezigidi
Mbini. Namhlanje : 4.104 yezigidi
3. I-CBS Ngale ntsasa : 3.539 yezigidi
1. Namhlanje : 1.517 yezigidi
Mbini. I-GMA : 1.366 yezigidi
3. I-CBS Ngale ntsasa : 964,000
U-Lauer ubambise inkqubo ye-NBC News yakusasa ukusukela nge1996 kwaye yabanjwa ngokudibeneyo Namhlanje ukusukela ngo-1997. I-NBC yamgxotha kwiveki ephelileyo emva kwesikhalazo esineenkcukacha esivela kugxa wakhe esolwa ngokuziphatha gwenxa ngokwesondo kwindawo yokusebenza.
Umsantsa wamathanga ufile
I-CBD yeoyile yase-UK - Iimveliso zeoyile ze-CBD ezigqwesileyo zase-UK zango-2021
I-AYTO Cast ityhila iimfihlo kwaye iphosa umthunzi kuyo yonke i-Twitter
Kunzima Ukuba 'ngumArabhu wamaKristu' kwa-Israyeli, kodwa hayi ukuba kutheni ucinga
UJohn wayne gacy upeyinta imifanekiso
Kutheni i-phineas kunye ne-ferb zirhoxisiwe
yimalini oyibhatalayo o reilly uyenza ngonyaka
thenga i-delta 8 thc kwi-intanethi
bukela amabhaso ezifundo kwi-intanethi
dni intsingiselo kwi-movie ye-365
iinkampani ze-ballet eziphezulu kwi-us 2015